Manni fayyaa Iowa akka himeti namni coronavirus qabame bakka kampani fooni birraa keessatti akka | KWIT
Akkasumas, barreesa qonnaan bultoota akka himeti bineensota jaraa ajeesuf kan dirqamsise fooni booye qopheesuf akka ta’an himan. Oddefanno Iowa state university akka muldhisuutti booyyeedhan 600,000 oltu oorruu iowa keesa jira.
Magaala Dakota fi Woodbury County guyyaa kamsa duuti haarawni akka hin jirre himan. Namni haarawa magaala Woodbury county keessatti coronavirus qabame 23 yoo ta’u waliigalatti 2,700 gaheera. Magaala Dakota County keesati harooyni namni qabame 2 yoo ta’u waliigalati 1,600 tareera. Magaala Union county keessati namni qabame 88 gaheera.
Har’a manni dhugati state keessa magaala Woodbury county dabalate 50% banameera. Departmentin polisaa magaala Sioux City akka jedheti hagam walirra fageenya fi seera akkami akka qabaan hinbeynu jedhan. Haa ta’u malee seera bahee kan xuquu yoo ta’u seera hayyama isaani akka irra fudhatamu himan.
Dubbataan Sioux land public media akka jedheti yeroo gaari dabarsun rakko hin qabu garuu of eegu qaban jedhe.
Iowa workforce development akka gabaaseti hojatooni 14,600 hojii dhabdummaa torbaan tarte keesa guutameera. Kunii wantorbaan taree dura caala dabale. Wareen bayyinnan umani hoji dhabduma guutate kan akka oomisha, nama mana dalaga dhuunfa qabu fi daladoota mana fayyaa fa’a. Lakkofsi state Iowans hojidhabduma guutataniiif torbaan tarte keessa nama 180,000 argachuu hindandeene.
Magaala Nebraska keessati namni torbaan tarte hojii dhabdumma guutate nama 5,900 dha. Kunis kan turban tarteen walfakkaata. Kunis magaala Nebraska keesati March qixxee asi namni guutate 129,000 gaheera.
Akka oduu confenrence har’ati Iowa governor Kim Reynolds dhukuba babalina covid-19 hiri’isuudhaf
By Fatiya Adam • May 26, 2020
Akka oduu confenrence har’ati Iowa governor Kim Reynolds dhukuba babalina covid-19 hiri’isuudhaf seera dabalata akka gootu himte.
Wiiyxata dhufu, kan akka mana qumaari, speedways, wal dorgomii tracks, bowling alleys, paarkidhanii fi bakki sirbaa alaa harka 50% banamu nidanda’a. akkasumas bakka sports fi walgahiidhan ummata nama 10 nihayyamama.
Manneen dhugaatis naamota muraasa qofan nibanama, addaa fageenyi namas egudhan guyyaa Kamsa akka banamu himame.
Manni fayyaa Sioux land guyyaa Jimaata sababa covid-19 namni dabalatan du’uu himan
By Fatiya Adam • May 22, 2020
Manni fayyaa Sioux land guyyaa Jimaata sababa covid-19 namni dabalatan du’uu himan. Waliigalatti magaala Woodbury county keessati namni du’e 26. Duuti magaala Sioux City nannawa metro dabalaa dhuffe waliigalatii nama 41 gahee jira.
Akkasumas manni fayyaa Sioux land akka himetti, magaala Woodbury county keessati namni haarawa qabame 43 yoo ta’u, waliigalati kaa qabame nama 2,400 ol ta’eera. Magaala Dakota County namni haarawa qabame 6 yoo ta’u waliigalatti nama 1,600 gaheera. Guyyaa laman darban kanaa Dakota county keessati duuti hin galmooyne.